မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: March 2014
Well come Amarapura in Burma
Bodawpaya's grandson, King Bagyidaw moved the Court back to Ava in November 1821. Bagyidaw's successor King Tharrawaddy again moved the royal capital back to Amarapura in February 1842. In February 1857, King Mindon began building Mandalay as his new capital city, 11 km north of Amarapura. With the royal treasury depleted by the Second Anglo-Burmese War of 1852, Mindon decided to reuse as much material from Amarapura as possible in the construction of Mandalay. The palace buildings were dismantled and moved by elephant to the new location, and the city walls were pulled down for use as building material for roads and railways. Part of the moat is still recognizable near the Bagaya Monastery. The city officially ceased being the capital on 23 May 1859 when Mandalay took over that role.
Pahtodawgyi – A stupa built by King Bodawpaya in 1816 outside the city walls
Bagaya Kyaung –awooden monastery founded by King Mindon
Kyautawgyi Paya – A stupa built by King Pagan in 1847 at the farther end of U Bein's bridge
Maha Gandhayon Kyaung -alarge modern monastery complex with hundreds of monks and novices, well known throughout the country
အင်းအိုင်ဝိုက်လည် အမရတည် ဆိုပြီးရှေးသူကြီးတွေက အမရပူရမြို့တည်နန်းတည် သက္ကရာဇ်ကို လင်္ကာစာသားလေးနဲ့မှတ်ခဲ့ကြတယ် ။
အင်း ၁ အိုင် ၁ ဝိုက် ၄ လည် ၄ ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၄ ခုနှစ်မှာ အလောင်းမင်းတြားကြီးရဲ့ စတုတ္ထသားတော် ငယ်မည်မောင်ဝိုင်း ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းတည်ခဲ့တယ်။
ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းရယ် စစ်ကိုင်းမင်းဘကြီးတော်ရယ် ရွှေဘိုမင်း (မင်းတုန်းမင်း အိမ်ရှေ့စံကနောင်ကိုယ်တော်ကြီးတို့ခမည်းတော်) တို့နန်းစံခဲ့ကြတယ် ။
အမရ သေခြင်းကင်းသော ပူရ မြို့ ဆိုပြီးနာမည်လည်းပေးတတ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီမြို့ဟာလည်း လက္ခဏာရေးသုံးပါနဲ့တော့မကင်းနိုင်ခဲ့ရှာပါဘူး အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တနဲ့တွေ့တော့ သူလည်း ဒုက္ခရောက်ရရှာတယ် မတည်မြဲဘူး ဘုရင်တွေလည်းသေတာပဲမို့လား .....
အမတခေမာသောင်ကမ်း နိဗ္ဗာန်ကမ်းကိုပို့ဖို့ ဟောဒီသေခြင်းကင်းတဲ့မြို့ကြီးကနေ အတိတ်နမိတ်တဘောင်နဲ့လာတဲ့ ဒီတစ်ခါရွာတဲ့မိုး ချိုးဖြစ်အောင်ချိုး ဆိုတဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး တရားမိုးတွေရွာလိုက်တာ ချိုးတဲ့သူချိုး သောက်တဲ့သူသောက်နဲ့ ခွင့်သာခိုက်မှာ မလိုက်လို့ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ကျန်ခဲ့ပေါ့လေ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ မြို့ကြီးကိုအထက်စီးကကြည့်နေပြီး ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး အကြိမ်ကြိမ်သနားနေမပါရဲ့ဗျာ.....
၂၁ မတ် ၂၀၁၄
ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းတရားလက်ထက် အမှတ်တရ လက်ရာများဖြစ်ပါတယ်...
အမရပူရရွှေမြို့တော်ကြီး ဘုန်းမီးနေလ တောက်ပခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြစရာဆိုလို့ လေးငါးခုကျန်ခဲ့တဲ့ အထဲကမှ လက်ရာတစ်ခုပါ...
Posted by Mr Htay Tint at 2:43 AM0comments
1956 ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ကြစို့ 
အာရှတိုက်ရဲ့စပါးကျီ
ဆီကို ရေချိုး ။ ဆေးရိုး မီးလှုံ ။
စပါးတောင် လိုပုံခဲ့ဖူးတဲ့တိုင်းပြည် ။
ရွေနိူင်ငံသားတွေလို့ကမ္ဘာ အလယ်မှာ
ထယ်ဝါ ဝင့်ကြွားစွာ ရုပ်ဝတ္ထု
အသိဥာဏ်ပညာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် ။
နိုင်ငံတကာက လေးစားခဲ့ရဖူးတဲ့ 
ပါလီမာန် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်တုံးက
အသိမြင့်မားအောင် သင်ခဲ့တဲ့ စာတွေ အသိပညာတွေ
နိူင်ငံရေးပြသနာတွေ ကို စားပွဲပေါ်မှာ မရှင်းတတ်လို့ 
၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း သေနပ်သံတွေနဲ့ပျောက်ခဲ့ရတယ် ။
ဘဝတွေ ပျက်ခဲ့ရပြီ ။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ဖတ်စေဖို့ 
အသက် ၉၀ အရွယ်
လက်ခံမှာ မဟုတ်ဖူး ဆိုကာ
လူငယ်မျိုးချစ်တွေ လေ့လာဖို့ တင်ပေးလိုက်တယ် ။
အစိုးရနဲ့လူထု ဦးဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေက
မျိုးချစ်လူထုတွေကို စနစ်တကျ ဦးဆောင်ဖို့ 
ရရာလက်နက်စွဲပြီး လှုပ်ရှားကြမှာ သေချာတယ် ။
MYANMAR Civics 1956 by Ko Htay Tint
Posted by Mr Htay Tint at 12:10 AM0comments